स्थितिमा कुञ्जी शब्दहरू कसरी छनौट गर्ने? Semalt बाट प्रभावी वाक्यांश रणनीतिहरू
पोजिशनिंगमा कुञ्जी शब्दहरूले उत्पादन, सेवा र प्रस्तावको विशिष्टताको नाम मात्र प्रतिबिम्बित गर्दैन। स्थिति को लागी एक राम्रो कीवर्ड रणनीति पनि उत्पादन को बारे मा जागरूकता निर्माण र एक खरीद निर्णय को हरेक चरण मा प्रयोगकर्ताको आवश्यकता र इरादा खाता मा लिन्छ।
र वाक्यांशहरूको अन्तिम चयन खातामा तपाईंको वित्तीय क्षमताहरू र पहिलो स्थिति प्रभावहरूको प्रत्याशामा तत्परता लिन्छ।
अझ राम्रो र राम्रोसँग बुझ्नको लागि कसरी अगाडि बढ्ने, हामी तपाईंलाई यो सामग्री मार्फत चरण-देखि-चरण प्रक्रिया पत्ता लगाउन आमन्त्रित गर्दछौं। एक बोनस को रूपमा, हामी एक प्रस्ताव नि: शुल्क विकल्प तपाईंको वेबसाइटको हालको स्थिति जाँच गर्न।
यसबाहेक, यो लेख समाप्त गर्नु अघि, हामी तपाईंलाई साझा गर्नेछौं वेबसाइट पदोन्नतीको लागि उत्तम उपकरणहरू।
वेबसाइट पोजिशनिंगको प्रभाव बिक्री हुन्छ, त्यसैले वाक्यांश छनौट गर्ने व्यक्तिको लागि प्राकृतिक दिशा भनेको वाक्यांशहरूको साथ प्रस्तावलाई राम्रोसँग वर्णन गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो। त्यसकारण, उत्पादन वा सेवा वर्णन गर्ने सब भन्दा लोकप्रिय वाक्यांशहरू SEO रणनीतिमा समावेश छन्।
यस दृष्टिकोणमा, तथापि, ती सम्भव समाधानहरू खोज्ने, श doubts्का गर्ने, र सल्लाह चाहिने प्रयोगकर्ताहरूका बीच निर्माण पहुँच समावेश गर्दैन। अर्को कठिनाइ वाक्यांशहरूको लागि उच्च प्रतिस्पर्धा हो। पोजिशनिंग, इन्टरनेटमा विज्ञापन जस्ता वाक्यांशहरूको लागि अप्टिमाइजेसन गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो छ किनकि विश्वभरिका सबै एजेन्सीहरू यी वाक्यांशहरूमा देखिन मनपर्दछ।
कसरी प्रतिस्पर्धा हराउने? गाह्रो र यसको मतलब वाक्यांशहरूको स and्ख्या र पाठको भोल्युम आउट गर्दै खोज्नु हो। त्यसोभए तपाइँको कुञ्जी शब्द रणनीतिलाई समृद्ध बनाउने विचार गर्नुहोस् र तपाइँको प्रयोक्ताको मनसायलाई विचार गर्नुहोस् किवर्डको लोकप्रियता प्रयोग गर्नुको सट्टा
कुञ्जी शब्द र प्रयोगकर्ता लक्ष्यहरू
कुञ्जी शब्दहरू छनौट गर्दा, हामी गुगलमा जानकारी खोजीका लागि प्रयोगकर्ताहरूका लक्ष्यहरूको विश्लेषण गर्नुपर्दछ। एक व्यक्ति जो एक समस्याको सामना गर्दछ र समाधानको स for्केत खोज्दछ, बिभिन्न लक्ष्य हुन्छ। Google मा एक विशेष उत्पादको नाम प्रविष्ट गर्ने एक व्यक्तिको फरक लक्ष्य हुन्छ। यो अभियानको लागि कुञ्जी शब्द आधार निर्माण गर्न लायकको छ जसरी वेबसाइटमा गुगलमा बिभिन्न अभिप्रायहरू अपनाउने प्रयोगकर्ताहरूको लागि अनुकूलित गर्न।
यो सजिलैसँग गुगलमा र वेबसाइटमा ग्राहक यात्राको विभिन्न चरणहरूमा दिइएको वाक्य प्रकारहरू लागू गरेर देख्न सकिन्छ। यो गर्नका लागि तपाईले आफ्नो प्रयोगकर्ताहरूलाई वर्गीकरण गर्न प्रभावकारी रूपमा फरक पार्नु पर्छ।
यस लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न निम्न चरणहरू छन्ः
१. समाधान खोज्दै
प्रयोगकर्ता अक्सर उत्पादन वा सेवा बारे अनजान हुन्छ। उसको आवश्यकता भनेको आफ्नो समस्याको समाधान खोज्नु हो। त्यसैले उसले सल्लाह, स h्केत, जानकारी खोज्दछ, संक्षेपमा, उसले दिएको विषयमा ज्ञान प्राप्त गर्न चाहन्छ। यस उद्देश्यका लागि, उसले प्रश्नहरूको रूपमा संरचना भएको वाक्यांशहरू प्रयोग गरेर खोजी गर्नेछ: कसरी, यो के हो, किन।
यस चरणमा वाक्यांशहरूको उदाहरणमा समावेश छ: एउटा सानो भान्छाको व्यवस्था कसरी गर्ने, इन्टरनेट मार्केटिंग के हो, किन उनीहरूको पिठमा दुख्यो, पहिलो कुराकानीको लागि के लगाउने आदि।
एक समाधान खोजिरहने प्रयोगकर्ताले प्राय: निर्दिष्ट जानकारीको साथ पृष्ठहरूको आशा गर्दछ। यदि तपाईं उसका आवश्यकताहरू पूरा गर्न चाहनुहुन्छ भने, मूल्यवान र धनी सामग्री ब्लग वा गाईडको रूपमा ख्याल गर्नुहोस्। यो समूहमा सामग्री लक्षित गर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने वाक्यांशहरू राम्रो SEO उपकरणहरूमा फेला पार्न सकिन्छ:
सेनुमा "प्रश्नहरू" ट्याबमा;
SEMSTORM मा, "प्रश्न जनरेटर" ट्याबमा;
प्रश्न अन्तर्गत कीवर्ड एक्सप्लोररमा Ahrefs मा;
सर्फरमा, प्रश्नहरूमा कीवर्ड रिसर्च ट्याबमा।
तपाईं लेख शीर्षकको रूपमा उपकरण द्वारा उत्पन्न प्रश्नहरूको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
२. समाधानका बारे प्रयोगकर्ता सचेत छन्
प्रयोगकर्ता जागरूकता निर्माणको चरण त्यो समय हो जब उसले कुन उत्पादन वा सेवा चाहिन्छ भनेर बुझ्न थाल्छ। उसलाई खास उत्पादनहरूको बारेमा अझै थाहा छैन, तर के खोज्ने भनेर उसलाई राम्ररी थाहा छ। कुञ्जी शव्दहरू जुन त्यसका लक्षहरूसँग मेल खान्छ सबै वाक्यांशहरू हुन् जसले उत्पादन कोटी, उत्पादन, सेवा, र ब्रान्ड वर्णन गर्दछ।
यस चरणमा वाक्यांशहरूको उदाहरणहरू: महिला चलिरहेको जुत्ता, l०l पर्यटक ब्याकप्याक, व्यवसाय कार्ड प्रिन्टि,, शुरुवातका लागि अंग्रेजी पाठ्यक्रम, आदि।
प्रयोगकर्तालाई थाहा छ कुन उत्पादन/सेवा उसले चाहिन्छ तर एक खास ब्रान्डमा गाँसिएको छैन, उत्पाद कोटि भित्र खोजी गर्दछ, र विभिन्न ब्रान्ड र मूल्य कोटिबाट समान उत्पादनहरू तुलना गर्दछ। यो प्रस्तावना आकर्षक तरिकाले प्रस्तुत गर्न र उत्पादन र ब्रान्डको नामको साथ वाक्यांशहरूको लागि दुबै पृष्ठ र उत्पाद कोटी अनुकूलन गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
यस चरणमा हामी एक प्रयोगकर्तासँग पनि काम गर्न सक्दछौं जुन एक विशेष ब्रान्डसँग राम्रोसँग परिचित छ र यसको प्रस्ताव भित्र खोज्नेछ। यसैले ब्रान्ड वाक्यांशहरू र Google मा एक ब्रान्ड वा स्टोर नामको लोकप्रियतालाई महत्त्वपूर्ण पार्दै। त्यस्ता प्रयोगकर्ता फिर्ती ग्राहक हुन सक्छन्, उही उत्पादनको खरीद, वा उही ब्राण्डको अर्को उत्पादन खरीद गर्न।
A. एक प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया खोज्दै
अनलाइन शपिंग थुप्रै पक्षमा स्थिर बिक्री भन्दा फरक छ। दुबै केसहरूमा, ग्राहकसँग धेरै शंका छ र यसका बारे पुष्टिकरण चाहिन्छ कि उसले के चुनेको हो निश्चित मूल्यमा उत्तम सम्भाव्य समाधान हो। खरीद गर्नु अघि, उसले विचार, समीक्षा, र उत्पाद तुलनाको लागि खोजी गर्दछ।
यस्तो प्रयोगकर्ताको लक्ष्यको उत्तर दिन, यो वाक्यांशहरू सहित लायक छ: उत्पाद नाम + रायहरू, उत्पाद कोटि नाम + उत्तम/राम्रो/सिफारिस गरिएको, उत्पाद नाम बनाम उत्पाद नाम + के छनौट/कुन राम्रो छ, आदि। उदाहरण को लागि सामसु Samsung बनाम आईफोन के छनौट गर्न।
Con. रूपान्तरण गर्ने प्रयोगकर्ता
हामी विश्वास गर्छौं कि खरिद गर्न सबैभन्दा नजिकका प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले उत्पादनहरू र सेवाहरू खोजी गर्दछन् Google मा तिनीहरूका नामहरू सहित तलका साथ: मूल्य, सस्तो, भण्डार नाम, स्थान, आदि।
त्यस्ता प्रयोगकर्ताहरूलाई रूपान्तरण गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले यदि तपाईं नयाँ सम्बन्धहरू स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं पहिलो चरणमा फर्कनुपर्दछ र अविश्वासी प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्न सुरु गर्नुपर्दछ। रूपान्तरणको लागि अप्टिमाइज गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ, तर कम पहुँच छ, त्यसैले तपाईंको कीवर्ड रणनीति समृद्ध बनाउने विचार गर्नुहोस् अघिल्लो चरणहरूको वाक्यांशहरूको साथ साथै।
यस चरणको सारांश राख्नका लागि - एक प्रभावी कुञ्जी रणनीतिले तपाईंलाई बिभिन्न प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्न अनुमति दिन्छ - जो किन्नुपर्दछ कि उनीहरूलाई सल्लाह किन्नुपर्दछ जो किन्नको लागि कटिबद्ध छन्। सबै प्रयोगकर्ता समूहहरूको ख्याल राख्न लायक छ, किनकि प्रत्येक चरणको साथ प्रयोगकर्ताहरूको समूह सानो र सानो हुन्छ, जुन सामान्यतया फनेलको रूपमा चित्रण हुन्छ, जसको स narrow्कोष्ट रूपान्तरण चरणसँग मिल्छ।
कुञ्जी शब्द र प्रतिस्पर्धा
पोजिशनिंगको लागि कुञ्जी शब्द रणनीतिमा तपाइँका प्रतियोगीहरूका शब्दहरूको विश्लेषण समावेश गर्दछ। प्रतिस्पर्धा द्वारा, हामी पृष्ठहरू छान्छौं जुन हामीले चयन गरेका वाक्यांशहरूको लागि शीर्ष १० मा देखिने छ। किनकि तिनीहरू राम्रा-राम्रा-राम्रा अवस्थित छन्, तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ कि तिनीहरूको राम्रा-राम्रा वाक्यांशहरू हुन सक्छन्। यो वाक्यांशहरूको तैयार सूचीले प्रतिस्पर्धा भएको केही हराइरहेको छ कि छैन भनेर जाँच गर्न लायक छ। यो धेरै सरल छ - जब प्रतिस्पर्धीहरूको वाक्यांश म्यानुअल रूपमा जाँच गरिएको थियो बिर्सियो। धेरै राम्रा SEO उपकरणहरूले तपाईंलाई स्वचालित रूपमा तपाइँका प्रतियोगीहरूका वाक्यांशहरूको विश्लेषण गर्न अनुमति दिनेछ।
उदाहरण को लागी, Semalt उपकरणसँग एक रिपोर्ट छ जसले प्रतिस्पर्धासँग तपाइँसँग मिल्दो वाक्यांशहरू देखाउँदछ, कुन वाक्यांश तपाइँसँग छ कि प्रतियोगितामा छैन, कुन वाक्यांशसँग प्रतियोगिता छ र कुनसँग तपाइँसँग छैन।
साथै, तपाईं यी वाक्यांशहरूको लागि पृष्ठ स्थानहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ।
अर्को रोचक सूची सर्फर द्वारा उत्पन्न गरिनेछ। यसले तपाइँलाई प्रतिस्पर्धाबाट उस्तै उप पृष्ठसँग तुलना गरेर एक विशिष्ट उपपृष्ठको सामग्री विश्लेषण गर्न अनुमति दिन्छ। यसको लागि धन्यबाद, हामी सिक्छौं, विश्लेषण गरिएको प्रतिस्पर्धाको आधारमा, कति पटक पाठ र शीर्षकहरूमा व्यक्तिगत कुञ्जी थप्न लायक हुन्छ। हामीसँग वाक्यांशहरूको सूची हामीसँग पर्याप्त छ कि हामीसँग उनीहरूसँग पर्याप्त छ वा हामी के-के गर्नुपर्दछ (वाक्यांशहरू थप्नुहोस्/हटाउनुहोस्) को मूल्या receive्कन प्राप्त गर्दछौं।
जब एक एसईओ वाक्यांश रणनीति बनाउँदा, यो कुञ्जी शब्दहरूको प्रतिस्पर्धात्मकतामा ध्यान दिन लायक छ। हामी उनलाई उपकरणमा जान्ने छौं, अरूमा नि: शुल्क Ubersuggest वा भुक्तान गरिएको - Ahrefs। बिभिन्न उपकरणहरूमा यसलाई अलिक अलिक फरक भनिन्छ, उदाहरणका लागि। SEO कठिनाईको रूपमा, तर यसको अर्थ उही हो - दिइएको वाक्यांशको लागि पृष्ठ स्थिति राख्न कत्ति गाह्रो हुन्छ। सामान्यतया, छोटो वाक्यांशहरू जुन ग्राहक यात्राको पहिलो चरणमा तोकिएकाहरू सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी हुन्छन्। जबकि लामो वाक्यांश, तथाकथित लामो-पुच्छ वाक्यांशहरू कम प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, र एकै समयमा कन्भर्टरिंग प्रयोगकर्तालाई स .्केत गर्दछ। यो एक ठूलो सरलीकरण हो र प्रत्येक वाक्यांश व्यक्तिगत रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्दछ, उपकरणहरू र प्रभावहरूको अवलोकनको प्रयोग गरेर।
किवर्ड रणनीति बनाउँदा वाक्यांशहरूको प्रतिस्पर्धालाई किन ध्यानमा राख्नुहुन्छ? वाक्यांशको उच्च प्रतिस्पर्धाले धेरै कामको प्रतिज्ञा गर्छ, त्यसैले ठूलो बजेट चाहिन्छ। यदि कम्पनीको विकासको यस बिन्दुमा, ग्राहकसँग ठूलो बजेट छैन, यो अन्य, कम प्रतिस्पर्धी वाक्यांशहरूलाई विचार गर्नु उचित हो। कम प्रतिस्पर्धाको मतलब यो होइन कि वाक्यांशहरू मूल्यवान छैनन् र बिक्री ल्याउँदैनन्। यसको मतलव केहि कम्पनीहरू र वेबसाइटहरूले उनीहरूलाई अनुकूलन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
आला वाक्यांश प्रतिस्पर्धी उद्योगहरु मा एक अवसर हो। कोनाई वाक्यांश र वाक्यांश बीचको रेखा कहाँ छ जुन कसैले पनि प्रयोग गर्दैन? फेरि, औजारहरूले खोजीको औसत मासिक संख्या देखाउने सहयोग गर्दछ। यो जान्न राम्रो हुन्छ कि लोकप्रिय कीवर्ड प्लानरले भुक्तान गरिएको खोज परिणामहरूमा डेटा प्रदान गर्दछ। यो सूचक जाँच गर्न अझ राम्रो हुन्छ, उदाहरण को लागी, सेनुटो वा Ahrefsa मा। आला वाक्यांशहरूले तपाइँलाई एसईओ गतिविधिहरू लक्षित गर्न अनुमति दिँदछ, सामान्य वाक्यांशहरूको विपरीत जुन पहुँच पुग्छ। अरू के छ, आला वाक्यांशहरू स्थिति गर्न सजिलो छ।
यहाँ तपाईं आरोप लगाउन सक्नुहुन्छ कि आला वाक्यांशहरूको लागि स्थिति एक घोटाला हो किनभने यसलाई धेरै प्रयासको आवश्यकता पर्दैन। जे होस्, कृपया नोट गर्नुहोस् कि यी प्रकारका वाक्यांशहरूले तपाईंको कुञ्जी शव्द रणनीतिलाई पूरक गर्दछ, तपाईंको कार्यहरूको आधारमा होइन। सामान्यतया, हामी त्यस्ता वाक्यांशहरू कम्पनी ब्लग निर्माणको चरणमा प्रयोग गर्दछौं वा जब हामी प्रस्तावको एक संकीर्ण भागमा ध्यान दिन चाहन्छौं।
एक कुञ्जी शब्द रणनीति सिर्जना गर्नु बहु-चरण प्रक्रिया हो जुन दुबै उपयोगकर्ताको आवश्यकताको गहन विश्लेषण र प्रतिस्पर्धाको विश्लेषण समावेश गर्दछ।
AutoSEO र FullSEO जस्ता उत्तम उपकरणहरू रणनीतिको लागि प्रयोग गरिन्छ, तर व्यापार ज्ञान पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण छ। एजेन्सीसँग सहकार्यको मामलामा अवस्थित ग्राहकहरूको व्यवहार र प्राथमिकताहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। जे होस् पोजिशनिंगको लागि वाक्यांश रणनीति सुरूमा विकसित गरिएको छ, पोजीसनको क्रममा नयाँ ग्राहकको आवश्यकता अनुसार चयन गरिएका वाक्यांशहरूलाई परिमार्जन गर्न अनुमति छ।
माथिका सबैबाट, यो स्पष्ट छ कि तपाईको कोठाको लागि सबै भन्दा राम्रो छनौट केक को एक टुक्रा हुनेछैन।
सफलताको लागि आधार एक राम्रो रणनीति वरिपरि निर्मित हुनेछ र सबै उपलब्ध विकल्पहरूको विचारमा सजीलै तपाईंको लक्ष्य प्राप्त गर्न।
यो एजेन्सीहरूको अस्तित्वको मुख्य कारण हो Semalt, जसले तपाईंलाई छोटो समयको लागि मद्दत गर्दछ प्रभावी रूपमा तपाइँको ब्रान्ड प्रचार र खोज परिणामहरूको शीर्षमा पुग्नुहोस् गुगल जस्तो खोज ईन्जिनहरूको।
अब तपाईलाई थाहा छ सम्पूर्ण प्रक्रिया A बाट Z लाई अनुसरण गर्नका लागि तपाईको व्यवसायलाई बढावा दिईन्छ र यसको पूर्ण फाइदा लिनुहुन्छ। जे होस्, यदि तपाईंसँग अझै प्रश्नहरू छन् भने, 24/7 उपलब्ध विज्ञहरूको हाम्रो टोलीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् तपाईंलाई आवश्यक समर्थन र मार्गदर्शन प्रदान गर्न।
हामी कसरी तपाईंको सामग्री उपयोगी छ भन्ने बारे तपाईंको टिप्पणीहरू पढ्न पाउँदा खुसी हुनेछौं।
जे होस्, यदि तपाइँ एसईओ र वेबसाइट प्रमोशन को विषय को बारे मा अधिक जान्नु आवश्यक छ भने, हामी तपाईंलाई आमन्त्रित हाम्रो ब्लगको भ्रमण गर्नुहोस्।